English Speaking Basics (67) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:04 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
================ I. EXAMPLES: ..................... 1. He is not only humorous, but also patient. သူက ဟာသဉာဏ် ရှိရုံသာမက စိတ်လည်းရှည်ပါတယ်။
(1) Not only ..but also နဲ့ ရေးတဲ့အခါမှာ ၀ါကျဟာ parallel ဖြစ်ရပါမယ် ၊ လိုက်ဖက်ညီမျှရပါတယ် Noun အချင်းချင်း ၊ verb အချင်းချင်း ၊ adjective အချင်းချင်း ၊ phrase အချင်းချင်း ၊ clause အချင်းချင်း စသည်ဖြင့် တူညီတာတွေကိုပဲ ဆက်ရပါမယ်
(2) Not only ကို ၀ါကျအစမှာ ထားပြီးသုံးတဲ့အခါမှာတော့ Not only + Helping verb + Subject ပုံစံရေးရပါတယ် NOT ONLY WILL THEY paint the outside of the house but also the inside.
(6) But also အစား as well, too တို့ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ် ၊ သို့သော်လည်း
as well နဲ့ too တို့ကိုတော့ ၀ါကျရဲ့ နောက်ဆုံးမှာပဲ ထားရပါတယ်
(7) အရေးမှာတော့ Comma ကို ၀ါကျပိုင်း clause နှစ်ခုကို ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြတဲ့အခါ (ဆက်တဲ့အခါ) but also ရှေ့မှာထည့်လေ့ရှိပါတယ် ။ .
(8) Not only နဲ့ but also မှာ .. also ကိုဖြုတ်ရေးကြတာ တွေ့ရများပါတယ် ။ but ကိုလည်း not only နဲ့ စတဲ့ ၀ါကျမှာ ဖြုတ်တာတွေ့ရသလို ၊ but also တစ်တွဲလုံးဖြုတ်တာ လည်းရှိပါတယ် နောက်ဆုံး Not only ကိုပါ ဖြုတ်ရေးတာမျိုးလည်း ရှားရှားပါးပါးရှိပါတယ် . “It depends on your point of view, but also on where you live.” (Don Watson, Weasel Words)
.. တွေ့ခဲ့ရတဲ့ example များဟာ မူရင်းဝါကျများဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ဖြည့်သင်တဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိလျှင်လည်း ပြောခဲ့ပါဦးနော် ..